एकै दिन भर्ना भएका अमिताभले कोरोनालाई जित्दा अभिषेकको रिर्पोट के आयो ? – Khabarbot
एकै दिन भर्ना भएका अमिताभले कोरोनालाई जित्दा अभिषेकको रिर्पोट के आयो ?
एजेन्सी – बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन् । यो जानकारी सबैभन्दा पहिला उनका छोरा अभिषेकले दिएका छन् । असार २७ गते कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि नानावती अस्पतालमा बाबु छोरा एकैसाथ भर्ना भएका थिए ।
आफ्नो उपचारमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलगायतलाई धन्यवाद दिएका उनले आफ्ना परिवारका सदस्यप्रति पनि कृतज्ञता जनाएका छन् । साथै स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका सम्पूर्ण शुभचिन्तक, सुभेच्छुकप्रति उनले आभार व्यक्त गरेका छन् ।
अमिताभ डिस्चार्ज हुँदा अस्पतालले अभिषेकबारे भने केही बनाएको छैन । अभिषेकले आफ्ना बाबुको कोरोना रिर्पोट नेगेटिभ आएको बताए पनि आफ्ना बारेमा भने केही बोलेका छैनन् । यसअघि सोही अस्पतालबाट ऐश्वर्या र आरध्याले कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेका छन् ।